२०७३ पौष २१ बिहीबार १६:४४:००
कुरा २०६२ सालतिरको हो । शेरबहादुर देउवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दोस्रोपल्ट अक्षमताको आरोप बोकेर जेल सजाय पाइवरी छुटेर घरमै बसेका थिए । उनी व्यक्तिगत कुराकानीमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग अत्यन्त रुष्ट थिए ।
त्यसबेला उनले बुझाएको प्रजातन्त्र जनताले केही वर्षमा नै फिर्ता लिएर आए तर अब उनले जुन गल्ती गर्दैछन् त्यसबाट देश र जनताले मुक्ति पाउन लाखौंको बली चढाउनु पर्ने र दशकौं समय लाग्ने हुनसक्छ । समय अझै छ, अझै फिर्ता हुने ठाउँ छ । आफूलाई नभए पनि शेरबहादुर देउवा आफ्ना पुत्र जयवीर देउवा र तिनका सन्तानलाई एक शान्त, सुन्दर र सम्पूर्ण नेपाल दिन चाहन्छन् भने अझै पनि समय छ । विवेकको प्रयोग गर्न अझै मौका छ ।
अब एकपल्ट विचार गरौँ, किन संविधान संशोधनले र विशेषतः अहिले भनिएको सीमा परिवर्तनले देशलाई यत्रो विकट अवस्था पुर्याउँछ ?
के अहिले नेपालमा सबै खस ब्राम्हणले सम्पूर्ण अधिकार पाएका छन् त ? कति खस ब्राम्हण र क्षत्री गरिबीको खाडलमा जाकिएका छन् ? ती गरिब ब्राम्हण वा क्षत्रीको अधिकार स्थापित भएको छ त ?
वास्तवमा जनताको अधिकार भनेको जनताको बाँच्न पाउने अधिकार, काम गरेर खान पाउने अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, पढ्न र बोल्न पाउने अधिकार आदि हुन् । त्यो अधिकार परिपूर्ति गरिदिने व्यक्ति वा दल सही हुन् ।
सरकारमा बस्ने व्यक्ति कुन जातिबाट आयो भन्ने कुरा मुख्य होइन गौण हुनुपर्ने हो । तर, हामी अहिले कुन जातिको सरकार बन्छ भन्ने सोचेर सीमांकनमा यत्रो रडाको मच्चाइरहेका छौँ ।
हाम्रा हिमाल, पहाड र तराईबाट गएका सबै छोरा र छोरीले मलेसियाको विकासको कार्य होस् वा इजरायलको घर, खेत रेखदेख गर्ने ‘ड्युटी’, ध्यानपूर्वक गर्न सकेकै छन् । हाम्रा दलित हुन् कि उपल्लो जातका तागाधारी, भारतका गल्ली गल्लीमा सुरक्षा दिन सकेकै छन्, हाम्रा हिमाली शेर्पा हुन् वा काठमाडौंका नेवार सबैले विदेशमा गएर एक से एक काम गर्न सकेकै छन् ।
अब एउटा प्रश्न सबैको मनमा आउँछ, यस्तो प्रदेश दिएर चाहिँ के फरक पर्छ ? वास्तवमा, सबैभन्दा चुरो कुरो नै यही हो ।
नेपाल धेरैवटा भुटानमा परिणत हुने खतरा नभइदिएको भए मधेसीलाई मधेस, खसानलाई खस र भोटानलाई भोट भनेर सीमाबन्ध गरिदिन केही फरक पर्ने थिएन । तर, कुरा त्यत्तिमा सकिँदैन । देउवा र नेपाली कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने यो एउटा अनन्त सम्मको किचलोको थालनीमात्र हो ।
अहिले देउवालाई लागेको होला, पाँच नम्बर प्रदेशमा परेको केही पहाडी भूभाग चार नम्बरमा सारिदिए समस्या समाधान भइहाल्छ । तर, त्यो समाधान चाहिँ राजाको सुविधा बढाएको र उनको मान्छेलाई मन्त्री बनाएको समाधानजस्तो मात्रै हो ।
कसले ल्याउँछ त यो रडाको ?
नेपाललाई एक सशक्त राष्ट्रको रूपमा विकसित भएको देख्न नसक्ने कुनै पनि तत्वले यो समस्या ल्याउन सक्छ । हाललाई संविधान संशोधनको विषयमा भारतले चासो देखाएको छ, त्यसैले तिनले दिएको वचनका आधारमा देउवा र प्रचण्डलाई लाग्दो हो नेपालीले यसभन्दा बढी पीडा भोग्नुपर्ने छैन । तर भूराजनीतिका माहिर खेलाडी यत्तिकैमा चुप लागेर बस्दैनन् ।
नेपाललाई अस्थिरताको भुँवरीमा फसाएर यसबाट फाइदा लिन फेरि यही वा अन्य कुनै तत्व अगाडि सरिहाल्नेछ ।
संविधान संशोधन संसद्बाट पासै भएर दुई मधेस प्रदेश बने पनि ती प्रदेशबाट मधेसी नै निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति त गर्न सकिन्न । अनि के हुन्छ ? मधेसी फेरि पनि मधेसमा नै हेपिए भन्ने प्रपंच गर्न थालिन्छ ।
विदेशीको गोडामा परेर हैन आँखामा आँखा मिलाएर अघि बढ्ने नेता यस देशलाई चाहिएको छ । अतः इतिहास जोगाउने हो भने देउवाजस्ता सशक्त मनोबलका धनी नेताले एकपल्ट मनन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।